အမျိုးသားအဝတ်အထည်၊ အိတ်ကပ်၊ အမျိုးသားအဝတ်အစား - Hengqianxiang
သက်သောင့်သက်သာ, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်, အသစ်အဆန်း
စူပါပူနွေးသောဆောင်းရာသီအမျိုးသားဝတ်အဝတ်အထည်များ Padde ...
Shell 100% polyester 100% polyester Lining 100% polyester ဖြည့်တင်း 90% ဘဲ, 10% အမွေးအရွယ်အစားအရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်အရောင်မဆိုအရောင်ရရှိနိုင်အခြားအစစ်အမှန်ရက်ကွန်းဝံသားမွေးကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ဒီယောက်ျားဆောင်းတွင်း padded ဂျာကင်အင်္ကျီသည်အလွန်ပူနွေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်နံရံဒီဇိုင်းသည်ဂျာကင်အင်္ကျီကို ပို၍ ငယ်စေသည်။ ကြီးမားသောတကယ့်ရက်ကွန်းဝံသားမွေးသည်လေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအထူးသဖြင့်နွေး, ကောင်းသော version ကိုပါရှိပါတယ်။
စက်ရုံလက်ကားအ ၀ တ်အထည်များဖက်ရှင်အဝတ်အစားများ ...
Shell 100% polyester 100% polyester Lining 100% polyester ဖြည့်စွက် 90% ဘဲ, 10% feather အရွယ်အစားအရွယ်အစားမဆိုအရောင်ရရှိနိုင်အရောင်မဆိုရရှိနိုင်ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်အတိုအင်္ကျီသည်အလင်းရောင်၊ နူးညံ့။ နွေးထွေးသည်။ cuffs, neckline နှင့် hem of လူကြိုက်များသိုးသငယ်သိုးမွှေးဒီဇိုင်း။ ကုန်ပစ္စည်းသည်ပေါ့ပါး။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးစတိုင်ကျသည်။
စက်ရုံထုတ်လုပ်သူအမျိုးသားအဝတ်အထည်အ ၀ တ်အထည်များ ...
Shell 98% cotton, 2% polyester 100% polyester, imitation သိုးသငယ်သိုးမွှေး 100% polyester အရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်အရောင်မဆိုအရောင်ရရှိနိုင်ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်းအရည်အသွေးကောင်းဝါဂွမ်းထည်ဟာဂျာကင်အင်္ကျီ - တန်းတန်းလုပ်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေပြီးသင့်ကိုလှပပြီးသပ်ရပ်လှပစေသည်။ ၄၀% သိုးမွှေးသည်ဆောင်းရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်နွေးထွေးစေသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များဒီဇိုင်း၊ နွေးထွေးသော၊ လေထန်နိုင်သော၊ အထူးပေါ့ပါး။ နွေးထွေးသောပစ္စည်းများ။
Shell 100% polyester နံရံ 100% polyester ဖြည့် 100% polyester အရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်အရောင်မဆိုအရောင်ရရှိနိုင်ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောသိုးမွှေးထည်သည်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုအဆင့်မြင့်အောင်လုပ်သည်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေပြီးသင့်ကိုလှပပြီးသပ်ရပ်လှပစေသည်။ ၄၀% သိုးမွှေးသည်ဆောင်းရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်နွေးထွေးစေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သောဗားရှင်း၊
အမျိုးသားဝတ်အဝတ်အထည်ရှည်ရှည် Windbreaker ဂျာကင်အင်္ကျီ
Shell ၁၀၀% ဝါဂွမ်းအကွာအဝေး ၁၀၀% polyester အရွယ်အစားမည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုအရောင်ရရှိနိုင်ပါ။ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်နှစ်ဆရင်သားဒီဇိုင်း၊ ခါးပတ်အလှဆင်ခြင်း။ ပါးလွှာပြီးရှည်လျားသောဗားရှင်းသည်သင့်အားဂရုပြုစေသည်။ အညိုရင့်ဂျာကင်အင်္ကျီသည်အစဉ်အလာမဲ့ဂန္ထဝင်စတိုင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သောဗားရှင်း၊
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester အရွယ်အစားမည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုအရောင်ရနိုင်အရောင်မည်သည့်အရောင်မှမရရှိနိုင်ပါ။ ထုတ်ကုန်နိဒါန်းဤ ၀ တ်စုံသည်အနက်ရောင်ပိုက်နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ လက်မောင်းပေါ်ရှိဇစ်ပါအိတ်ကပ်ကိုထူးခြားစွာနေရာချကာအခြားရိုးရှင်းသော ၀ တ်စုံကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောရေစိုခံ။ လေထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပြင်ပနှင့်ကျပန်းဝတ်ဆင်ရန်ကောင်းသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအထူးသဖြင့်ရေစိုခံ။ လေဝင်လေထွက်မြန်ပြီးခြောက်သွေ့သည်
Hot Sale ဆောင်းရာသီအမျိုးသမီးအဝတ်အစား Fashional Down C ...
Shell 100% polyamide 100% polyester Lining 100% polyester ဖြည့်တင်း, 90% ဘဲ, 10% အမွေးအရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစားရရှိနိုင်အရောင်မဆိုအရောင်ရရှိနိုင်အခြားသူများကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်းတောက်ပသောပန်းရောင် Down Jacket သည် ၀ တ်ဆင်သူကိုဝန်မတင်ဘဲပြင်းထန်သောဆောင်းရာသီများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂျာကင်အင်္ကျီကိုရေကိုအကောင်းဆုံးခုခံနိုင်မှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအပူဆုံးရှုံးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ခြောက်သွေ့သောနည်းပညာနှင့်အသုံးပြုထားသည်။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်မတိုင်မီဂျာကင်အင်္ကျီ၏ပစ္စည်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဆန့်ထုတ်နိုင်သောသန္ဓေတည်သည်။
အားကစား ၀ တ်စုံအကျီင်္များ
ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ဤအားကစားဂျာကင်အင်္ကျီသည်ပြင်ပတွင်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ အဝတ်အထည်သည်ရေစိုခံပြီးအမြန်ခြောက်သွေ့သည်။ အပြင်ဘက်တွင်မိုးရွာရွာမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြisနာမရှိပါ။ အသက်ရှူနိုင်သောချည်များသည်ချွေးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စီးဆင်းစေသည်။ အဆင်ပြေသောရင်ဘတ်အိတ်ကပ်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ ၁။ အကြမ်းခံ။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ 2. အဆင်ပြေဆန့်။ ၃။ အထူးပေါ့ပါးပြီးနွေးထွေးသောအရာ ၄ ။ နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတို့တွင်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ သငျသညျအရောင်များကိုချစ်လျှင်, ဒီဂျာကင်အင်္ကျီကိုသင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ဂျေ ...
သငျသညျနမူနာနှင့်အမိန့်အတည်ပြုပြီးနောက်ကျနော်တို့ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏အတွေးအမြင် (သို့) အနုပညာလက်ရာများနှင့်အညီသင့်အားအသစ်သောစတိုင်များကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Beijing Hengqianxiang အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရိုးသားမှု, တာဝန်ရှိ, Win-Win
အထည်အလိပ်နှင့် garme ၏အခြေအနေကဘာလဲ ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-၁၉ ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အထည်အလိပ်နှင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည်ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်ပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မေလနှင့်ဇွန်လတွင်အချို့သောအချက်အလက်များကောက်ယူရရှိခဲ့သည်။ ပ ...
၂၀၂၀ နွေ ဦး ရာသီမတိုင်မီညနေစာ
၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြinနာများကိုအထူးအလေးပေးသောပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကျဉ်းချုံးပြီးနှစ်သစ်ကူးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရန်လူတိုင်းကိုသတိရစေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗားရှင်းထုတ်လုပ်သူရှိသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 ခုနှစ်တွင်မှော်ပြပွဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပသော MAGIC SHOW သို့တက်ရောက်ပါမည်။
ပထမ ဦး စွာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး
လိပ်စာ:RM4A22, Building B, Ritan International Trade Centre, Chaoyang District, Beijing, China, 100020